Il - Gpedia, Your Encyclopedia
Xididada iyo qaybaha isha dadka.
Il oo wadarteedu tahay Indho (ingiriis: Eye) waa xubinta araga ee dhamaan noolaha. Falaadhaha Iftiinku markay shay ku dhacaan dib ayay uga soo noqdaan taas oo markay isha soo gaadho neerfo u gudbiyaan maskaxda oo ugu dambayn muujisa sawirka shegyaas.
Araga oo ah awooda qabashada iyo bedelka mowjado ileyska iyo iftiinka muuqda ayaa ah mid bilaabma indhaha. Sidoo kale, aragu wuxuu ka mid yahay Shanta Laxaad ee dareenka noolaha. Qofka iyo xayawaanka aan wax arki karin waxaa loo yaqaanaa Indhoole (blindness).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Il&oldid=122587"